Modern Trade Supervisor at Nibban Electric and Electronics
Job Reference: MJ1529916783206
-Monthly Sales Target များအား ပြည့်မီကျော်လွန်အောင်ရောင်းချနိုင်ရမည်။
-Center များအား Display နေရာကောင်းများရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် Product အစုံတင်ပြီး ရောင်းချနိုင်ရန်။
-Center များနျှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး Promotion Plan များရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။
-Promoter များ၏ Daily Sales များ Review ပြုလုပ်ပြီး Slowing Moving, Non Moving Items များအား Center များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
-Consumer Complaint များ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
- ဘွဲ့ရ၊ အသက်(၃၀)နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။
- Supermarket Sales Management ပိုင်း လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၃)နှစ်ရှိရမည်။
- လူအများနျှင့် စကားပြောဆိုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်ရမည်။
- လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပါက ဦးစားပေးခန့်ထားပါမည်။
အလုပ်ချိန် မနက် ၈း၃၀ မှ ညနေ ၅း၀၀ ထိ
Promoter များအား အုပ်ချုပ်ဖူးပါသလား?:
Experience3နှစ်နှင့်အထက်ရှိပါသလား?:
Sales supervisor Nutri Life Company
Sales Supervisor Technoland Computer Trading Co., Ltd.